ဒေါက်တာမင်းကြည်ဝင်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက် - Burma News International
မတ်လ 23 ရက် 2017 ခုနှစ်
မွန်ပြည်နယ် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမင်းကြည်ဝင်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြေကြားချက်။
မေး ။ ။ မော်လမြိုင်- ချောင်းဆုံ သံလွင်မြစ်ကူးတံတားကိစ္စ မွန်ပြည်နယ်ဒေသခံတွေ ဆန္ဒပြတဲ့အပေါ်ဆရာ့အနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ?
ဖြေ။ ။ ကျနော့်အမြင်ပြောရင်တော့ ဒေသခံပြည်သူတွေ အခုလိုဆန္ဒပြတာ မမှားပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ယခုအခါမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ဆဲ ကာလလည်းဖြစ်တယ်၊ ပြည်နယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အနှစ်သာရက ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရရှိရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အခါလည်းဖြစ်တယ်၊ အခုလိုအမည်နာမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခြားသောတိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာလည်း ၎င်းတို့နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အမည်ကို သတ်မှတ်တာဟာ ပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်၊ ဒေသခံအသံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အမည်ကိုသတ်မှတ်ပေးမယ်ဆိုရင် ညီညွတ်မှုရှိမယ်၊အခုလို ပြည်သူ့လွှတ်တော်က မဲအများစုနဲ့ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ် အတည်ပြုလိုက်တာဟာ ကြည့်ရင်တော့ဒီမိုကရေစီပေါ့၊ ဒါပေမယ့် ပြည်သူ့အသံ ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုလည်း အလေးထားဖို့လိုပါတယ်။
မေး။ ။ တံတားအမည်သတ်မှတ်ဖို့က ပြည်သူ့လွှတ်တော်အထိ အဆိုတင်သွင်းတာက ဆရာဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ?
ဖြေ။ ။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အနေနဲ့ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအနေနဲ့ အဆိုတင်သွင်းရင်တော့ စစ်မှန်တဲ့ပြည်သူ့အသံ ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ “ပြည်သူ့အသံ လွှတ်တော်အသံ” ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်အရ မိမိတင်သွင်းတဲ့အဆိုက ဒေသအကျိုးစီးပွါးအတွက်၊ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွါးအတွက်ဆိုရင်တော့ တင်သွင်းသင့်ပါတယ်၊ ကိုယ့်အဆိုက ပြည်သူလူထုကိုထိခိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ မတင်သင့်ဘူး။
မေး။ ။မွန်ပြည်နယ်ဒေသခံများ တံတားအမည်သတ်မှတ်တာကို ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းက နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်တာပဲလို့ မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ပြောလိုက်တာဟာ ဒါကတကယ်ပဲလား ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ?
ဖြေ။ ။ မွန်တွေက ဘာနိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်စရာလိုလို့လဲ၊ လူထုဆန္ဒက ဒီလိုဖြစ်ချင်တာ၊ နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်တယ်လို့ ပြောရလောက်အောင် ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကို ဘယ်ပါတီကမှ မဦးဆောင်ဘူး၊ တစ်ချို့သူတွေကတော့ ထင်ကြတာပေါ့၊ ဒါက ဟိုပါတီကဦးဆောင်၊ ဒီပါတီက ဦးဆောင်တာမဟုတ်ဘူး၊ ဒီဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲမှာက ဒေသခံလူထုသက်သက်မဟုတ်ဘူး၊ ရဟန်းများလည်းပါတယ်၊ မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အခြားဒေသခံတွေလည်း ပါတယ်၊သူတို့ဆန္ဒပြတာက သူတို့ခံစားချက် ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ သိစေချင်လို့ သူတို့ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပြတာ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတားဆိုတဲ့အမည်ကို သူတို့မလိုလားဘူး၊ သူတို့ဖြစ်ချင်တာက ကိုယ့်ကံကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးဖို့ပဲ။ ဒါက နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော်မြင်တယ်။
မေး။ ။ ဒီဆန္ဒပြပွဲကို မွန်တွေဦးဆောင်ပြီး ပြုလုပ်တာမဟုတ်၊အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက လှုပ်ဆော်ပြီးမှ ပြုလုပ်တာလို့ Facebook book စာမျက်နှာအပေါ်မှာ ရေးသားပြောဆိုနေတာတွေကို ဆရာ့အနေနဲ့ ဘာပြောချင်သလဲ?
ဖြေ။ ။ဒီရေးသားပြောဆိုချက်ဟာလည်း သွေးထိုးတဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုပဲလို့ ကျနော်မြင်တယ်၊ တစ်ချို့အပြောက ဘုန်းကြီးက တစ်သောင်းရတယ်၊လူတွေက ခြောက်ထောင်ရတယ်လို့ လျှောက်ပြောနေကြတာပဲလေး၊ သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က မွန်လူမျိုးတို့၏ ဆန္ဒထက်သန်မှု လျော့ကျသွားအောင် အားနည်သွားအောင် လုပ်ဆောင်ချင်တဲ့သဘောပဲ၊ တစ်ချို့ကလည်း ဘယ်သူကမြှောက်ပြီး မွန်တွေက ဆန္ဒသွားပြရပါတယ်၊ ဒီလိုပြောတာလည်းရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် ပါတီတစ်ခုခုက ကြိုးကိုင်ပြီး ငွေထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာကတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ငွေထုတ်ပေးဖို့ဆိုတာက ဘယ်မွန်ပါတီကမှ အဲဒီလောက်မချမ်းသားကြပါဘူး။
မေး။ ။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်တဲ့ ဒီတံတားအမည်ကို ပြည်နယ်အစိုးရက အကောင်အထည်ပေါ်အောင် ဖော်ပေးရသလား?
ဖြေ။ ။ပြည်သူ့လွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်ပြီးဆိုတော့ ပြည်နယ်အစိုးရက အကောင်အထည်ဖော်ပေးရတယ်၊လုပ်ဆောင်ပေးရတယ်၊အထက်က ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီ၊ ဒီတံတားကို “ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတား” ဟုသတ်မှတ်ရမည်ဆိုတော့ ဒီတံတားမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတား အမည်ပဲထည့်ပေးရမယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ အခြားအမည်တစ်ခုခု သတ်မှတ်ပေးလို့မရပါဘူး။
မေး။ ။ဗိုလ်ချုပ်တံတားဆိုတဲ့အမည်ကို မွန်ပြည်နယ်ဒေသခံတွေ မလိုလားဘူးဆိုတာ ပြည်နယ်အစိုးရလည်း သိပြီးသာဆိုတော့ အထက်ကိုတင်ပြပိုင်ခွင့် မရှိဘူးလား?
ဖြေ။ ။ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ သဘောပဲလေ၊ ဒီကိစ္စကိုခံယူသင့်တယ်၊ လူထုဆန္ဒ ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ သုံးသပ်ရမယ်၊ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ပြည်သူလူထုကိုယ်စား အုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတော့ ပြည်သူလူထုဆန္ဒနဲ့ မကိုက်ညီဘူးဆိုရင် ကိုက်ညီအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်၊ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာ ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ လောလောဆယ် ဆွေးနွေးပိုင်ခွင့် မရှိသေးဘူး။
မေး။ ။ ပြည်ထောင်စုမှ ချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကို ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ လုံးဝဆွေးနွေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလား?
ဖြေ။ ။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရ၏သဘောထားဆန္ဒကို တောင်းခံလာရင်တော့ ဆွေးနွေးပိုင်ခွင့်ရှိတာပေါ့၊ သဘောထားတောင်းတာ မတောင်းတာက သူတို့ရဲ့တာဝန်ပဲလေး။
မေး။ ။ ဒီမော်လမြိုင်- ချောင်းဆုံ သံလွင်မြစ်ကူးတံတားအမည်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆရာ့အနေနဲ့ ဘာများဖြည့်စွက် ပြောလိုပါသေးလဲ?
ဖြေ။ ။ မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးပဋိပက္ခမဖြစ်ဖို့ ဒါကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စ၊ တိုင်းရင်းသားဆန္ဒသဘောထားအပေါ် အလေးအနက်ထားမယ်ဆိုရင် စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိမယ်၊ လူအများစုကိုအားကိုးပြီး လူနည်းစုအပေါ် အနိုင်ကျင့်မည်ဆိုရင် စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ဘယ်လိုမှ မရနိုင်ဘူး၊ တံတားကိစ္စအတွက်သာမဟုတ်ဘူး၊လူနည်းစုဆန္ဒသဘောထားကို လျစ်လျူရှုတာ မဖြစ်သင့်ဘူး၊အခြေခံဥပဒေမှာလည်း ပြဌာန်းထားတာရှိပါတယ်၊ဥပဒေ ပြဌာန်းသည့်အတိုင်း လေးနက်စွာ လိုက်နာမယ်ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဆီသို့ ရောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
More in this category: « မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်များ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရင်းကို တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အား ရှင်းပြ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် (Karen Community Association-UK) အဖွဲ့ဝင် နော်ထူးခူဆာစေးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း »